Shiinaha PAM-Cationic Polyacrylamide soosaarayaasha iyo alaableyda | Biyaha nadiifka ah
Wax soo saarkani waa kiimiko saaxiibtinimo u leh deegaanka .Ma aha mid lagu milmi karo inta badan dareeraha dabiiciga, oo leh dhaqdhaqaaq fiiqan oo wanaagsan, wuxuuna yareyn karaa iska caabinta khilaafaadka u dhexeeya dareeraha Waxay leedahay laba nooc oo kala duwan, budo iyo emulsion.
1. Badanaa waxaa loo isticmaalaa biyo-siinta iyo hoos u dhigista heerka cabbirka biyaha ee u dhoobada ah.
2. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo biyaha wasakhda ah ee warshadaha iyo bulaacadaha nolosha.
3. Waxaa loo isticmaali karaa sameynta xaashi si loo wanaajiyo awoodda qallalan iyo kuwa qoyan ee warqadda iyo in la wanaajiyo awoodda qalalan iyo kuwa qoyan ee warqadda iyo in la kordhiyo boos celinta fiilooyinka yaryar iyo buuxinta.
1. Si fudud loo milmi karo, kala diri karo waqtiga 40min
2. Hufnaan sare
3. Molikal sare, culeys kelli ah 10million
4. Nadaafad sare, oo aan nijaas lahayn
1. Waa in lagu qasi karaa isku-uruurinta 0.1% (iyadoo lagu saleynayo waxyaabaha adag) .Waxa fiican in la isticmaalo biyo dhexdhexaad ah ama qafiif ah.
2. Markaad xal sameyneyso, sheyga waa in si siman loogu kala firdhiyaa biyaha walaaqaya, badiyaa heerkulku wuxuu u dhexeeyaa 50-60 ℃.
3. Qiyaasta ugu dhaqaalaha badan waxay ku saleysan tahay tijaabada.
Kaydinta: Heerkulka keydinta emulsion-ka waa mid u dhexeeya 0-35 ℃. Emulsion-ka guud waxaa la keydinayaa 6 bilood. Marka waqtiga keydinta uu dheer yahay, waxaa jiri doona lakab saliid ah oo la dhigayo lakabka sare ee emulsion waana caadi. Waqtigaan, wajiga saliida waa in lagu soo celiyaa emulsion iyadoo la adeegsanayo kacsanaanta farsamada, wareejinta bamka, ama kacsiga nitrogen. Waxqabadka emulsion wax saameyn ah kuma yeelan doono. Emulsion-ka wuxuu ku fariisanayaa heerkul ka hooseeya biyaha. Emulsion-ka la qaboojiyey waxaa loo isticmaali karaa ka dib marka uu dhalaaliyo, waxqabadkiisuna si weyn isma beddeli doono. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in lagu daro qaar ka mid ah wax-soo-saarka lidka ku ah biyaha markii lagu qasi jiray biyaha.Waa la keydin karaa 6 bilood. Marka waqtiga keydinta uu dheereeyo, waxaa jiri doona lakab saliid ah oo la dhigayo xagga sare
Hore: PAM-Anionic Polyacrylamide
Xiga: PAC-PolyAluminium Koloriin